VACGF80006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF8000
VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine has lots of outstanding advantages, including extremely fast filling capacity, up to 8,000 500ml bottles per hour.
VACGF 80006In 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်မှာ တစ်နာရီမှာ 500ml ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ အထိ ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အပါအ၀င် ကောင်းကျိုးများစွာ ရှိပါတယ်။
Members of Viet An Company (Viet An ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ)
If you are interested in this ACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine, please call us now at 0949 414141.
တကယ်လို့ VACGF80006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်
၀၉-၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Automatic filling machines play an extremely important role in the food processing industries, including the bottled water industry. This machine is further improved and upgraded compared to the previous bottle filling machines.
This industrial pet bottle filling machine is suitable for the bottled water factories of high capacity that want to automate the production process. The product is currently being imported, distributed and installed both domestically and internationally by Viet An.
အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေက ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံအပါအ၀င် အစားအသောက် စက်ရုံတွေမှာ အလွန်အရေးပါလာပါတယ်။ ဒီစက်က အရင်ကထုတ်တဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေ
ဒီစက်က ရေဘူးစက်ရုံတွေအတွက် လုပ်ဆောင်မှုမြင့်မားစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အော်တိုဖြစ်စေပါတယ်။ ယခုအခါ ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးတပ်ဆင်ပေးနေပါတယ်။
VACGF80006in 1 Automatic bottle filling machine - capacity: 8000 bottles of 500ml /h
VACGF80006in 1ှ
VACGF8000 6in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်-လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-တစ်နာရီတွင် 500ml ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ ဖြည့်ပေးနိုင်သည်
VACGF8000 isaproduct of the industrial automatic bottle filling machines manufactured, imported, distributed and installed by Viet An General Trading Joint StockCompany.
VACGF8000 စက်ဟာ Viet An ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးထားတဲ့ စက်ရုံသုံး ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An -the best manufacturer, importer and distributor of genuine filling machine in Vietnam
Viet An- စစ်မှန်တဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်တွေကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ
Viet An is proud to be the best manufacturer, importer and distributor of filling machines, water purification lines, bottle blowing machines and tube ice making machines in Vietnam. We have been constantly updating and applying the latest and most modern production technologies in the world to our products.VAC
We commit that all our products are genuine with clear origin and ensure strict requirements on quality, durability and have reasonable prices.
Asatestament to these things, we have receivedavariety of noble awards and certificates by the State and been highly recommended by the consumers.
Viet An မှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်များ၊ ရေသန့်စင်လိုင်းများ၊ ဘူးမှုတ်စက်များ နှင့် ရေခဲစက်များကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ နေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရတာကို အလွန်ပဲ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အမြဲတမ်း အဆင့်မြှင့်တင့်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီနည်းပညာတွေ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက စစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကာ ကြာရှည်ခံတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံတော်က ဆုတံဆိပ်တွေ ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် ၀ယ်ယူသူတွေရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်း အပြည့်အ၀ ရရှိထားပါတယ်။
Some cups that Viet An has won (Viet An မှရရှိခဲ့သော ဆုတံဆိပ်အချို့)
Since our first launch of this VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine, we have received orders fromalot of enterprises and manufactures as well as numerous positive feedback from the customers. Let’s learn more about Viet An’s VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF80006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ကို ပထမဆုံး စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက လုပ်ငန်းကြီးငယ်တွေဆီကနေ အော်ဒါတွေ အများကြီး လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၀ယ်ယူသူတွေဆီကနေ ကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Viet An ရဲ့ VACGF8000 အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိအောင် လေ့လာကြရအောင်။
VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF80006In 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်
Certified ISO 9001:2015 Certificate
Like many previous automatic bottle filling machines, including VACGF2000, VACGF3000, VACGF5000 machines, VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine is manufactured using the most modern filling technology of the United States.
All the manufacturing and installation process comply with ISO 9001:2015standard - the most stringent standard today
VACGF 2000,VACGF 3000,VACGF 5000 အပါအ၀င် အခြားစက်တွေလိုပဲ VACGF 8000 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ တပ်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးက ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အတင်းကြပ်ဆုံး စံဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Certified Viet An exclusive brand - ISO 9001 Standard
Viet An ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် မူပိုင်လက်မှတ်-ISO 9001 အဆင့်
Thus, we are confident to state that this VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine is the best product with the most advanced technology application in the market currently.
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့က VACGF 80006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်
က ယနေ့ဈေးကွက်မှာ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြဖို့ ယုံကြည်ချက်အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။
6 automatic steps of the VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF 80006IN 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်
Below are6automatic steps integrated into the VACGF80006in 1 automatic bottle filling line In addition, you can choose to invest in some other automatic steps to integrate into this filling line.
အောက်တွင် VACGF 80006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့လိုင်းမှာ တပ်ဆင်ဖို့ အခြားအဆင့်တွေကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
First step: In addition, you can choose to invest some other automatic steps to integrate into this filling line.
ပထမအဆင့် - ဒါ့အပြင် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့လိုင်းမှာ တပ်ဆင်ဖို့ အခြားအဆင့်တွေကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
This is the stage that playsavery important role in the filling line.
This conveyor belt consists ofaframe system made from stainless steel withashiny surface, easy to clean and safe to use.
AC-2 gas is used to transfer the bottles automatically and quickly. Put the bottles together without being deformed.
ဒီအဆင့်က လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့လိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီရွေ့လျားစက်ခါးပတ်ကို သန့်ရှင်းရလွယ်ကူတဲ့ တောက်ပသောမျက်နှာပြင်ပါကာ အသုံးပြုဖို့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
2+3+4 steps: Washing - filling - capping (3-in-1)
၂+၃+၄ အဆင့်များ- ဆေးကြောခြင်း-လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း (3 in 1)
Bottle washing (ဘုးတွေကို ဆေးကြောခြင်း)
● In spite of 14 washing heads equipped like the previous model VACGF5000- model, the VACGF8000 line is equipped with 18 washing heads.
● VACGF 5000 လိုဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း ၁၄ ခုမပါဘဲ VACGF 8000 မှာဆိုရင် ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း ၁၈ ခုပါဝင်ပါတယ်။
● This automatic washing machine can replace ten operators. It helps to increase productivity, bring higher business efficiency and remarkably reduce labor cost.
● ဒီဆေးကြောပေးတဲ့စက်ကို အော်ပရေတာ ၁၀ ယောက်နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်က ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ခြင်း၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကို ပိုမို ထိရောက်စေခြင်းနဲ့ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်တွေကို ချွေတာခြင်းတွေအတွက် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
● The machine is designed with the capacity to operate foralong time.
● ဒီစက်ကို ကြာကြာလည်ပတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
● With its special design, this machine can be used to washawide range of bottles with various shapes. It can be used to wash the bottles witharound neck , flattened, and square necks. Thanks to this, the businesses can produce bottled water withavariety of shapes and appearance.
● ဒီစက်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဒီဇိုင်းကြောင့် ဒီစက်ကို ဘူးပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို လည်ပင်းဝိုင်း၊ လည်ပင်းပြား၊ လည်ပင်းလေးထောင့် စတဲ့ဘူးတွေကို ဆေးကြောဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကြောင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက ရေဘူးပုံစံမျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
● The water tank, machine frame and many other components are made from stainless steel, ensuring high durability. Compared to washing machines of common types in the market, this machine hasamore durable shelf life.
● ရေစည်၊ စက်ဖရိန်နဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးကို ကြာရှည်ခံအောင် စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ သာမန်ဆေးကြောပေးတဲ့စက်တွေထက် ဒီစက်ဟာ သိုလှောင်လို့ရတဲ့အချိန် ပိုမြင့်ပါတယ်။
● When an operator wants to change toaspecific type of bottle, he/she just needs to change to the mold accordingly. In this way, you can wash various types of bottles without investing in new washing machines like previous models.
● အော်ပရေတာက ဘူးကိုချိန်းချင်တဲ့အခါ ဘူးနဲ့ကိုက်တဲ့ ပုံစံခွက်ကိုသာ ချိန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ အရင်က မော်ဒယ်တွေလို ဆေးကြောပေးတဲ့စက်အသစ် ထပ်ဝယ်စရာမလိုဘဲ ဘူးမျိုးစုံကို ဆေးကြောနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
First, 18 pet bottles are sent to 18 wash heads which are transported viaagear conveyor system.Then the bottles will be held and rotated up with the bottle clamp.At the washing part, the bottles will be cleaned with the sterilized water sprayed from the washing heads. After that, they are transferred to the drying parts to clean all the water left inside.Finally, the bottles are brought back through the gear conveyor for the filling process.
ပထမဆုံး ဘူး ၁၈ ဘူးကို ဂီယာစနစ်ကိုဖြတ်ပြီး ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း ၁၈ ခုဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။
အဲ့ဒီ့နောက် ဘူးတွေကို ညှပ်နဲ့ညှပ်ပြီး လှည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးကြောပေးတဲ့အပိုင်းမှာ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းတွေကနေ ဘူးတွေကို ပိုးသတ်ပေးတဲ့အရည်နဲ့ ဖြန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာ ဘူးတွေကို အတွင်းထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ရေတွေကို သန့်ရှင်းဖို့ အခြောက်ခံစက်ထဲ ရွှေ့ပေးပါမယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘူးတွေကို ဂီယာရွေ့လျားစက်ကနေ ဖြတ်ပြီး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စနစ်ဆီကို သယ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
+ Automatic bottle filling
The filling machine is made of SUS#304 material with high durability. No corrosion, no rust, suitable forahumid environment. Easy to clean, high durability.
လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို ကြာရှည်ခံအောင် SUS#304 သတ္တုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ တိုက်စားခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းမရှိဘဲ စိုစွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူပြီး ကြာရှည်ခံပါတယ်။
The bottles, after being washed thoroughly, are sent to the filling part through the gear conveyor system. These 18 bottles will be firmly held at 18 filling heads through the clamping part. The water from the filling heads will be sprayed into the bottles according toaspecific amount programmed before. Then, the bottles are transferred to the capping heads through the gear conveyor.
သေသေချာချာဆေးကြောထားတဲ့ ဘူးတွေကို ဂီယာစနစ်ကိုဖြတ်ပြီး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့အပိုင်းကို ပို့ပေးပါမယ်။ ဘူး ၁၈ ဘူးက ညှပ်ကြောင့် ခေါင်း ၁၈ ခေါင်းမှာ ခိုင်မြဲနေမှာ ဖြစ်တယ်။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ ခေါင်းမှာရှိတဲ့ ရေတွေကို ပရိုဂရမ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်း ဘူးထဲမှာ ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာ ဘူးတွေကို ဂီယာစနစ်ကိုဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေဆီ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
Filling capacity: 6,000- 8,000 350ml bottles, 6,000- 8,000 500ml bottles and 2,000-2,500 1500ml bottles
ဖြည့်ပေးနိုင်သော စွမ်းအား - 350 ml ဘူး ၆၀၀၀ ကနေ ၈၀၀၀၊ 500 ml ဘူး ၆၀၀၀ ကနေ ၈၀၀၀၊ 1500 ml ဘူး ၂၀၀၀ ကနေ ၂၅၀၀ အထိ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Bottle clamping part: The clamping part is diversely designed so that it can be disengaged and replaced easily. To fill with different volumes, just disengage the existing clamp part from the machine and change to the relevant one. This helps to make the production process more flexible.
ဘူးတွေကို ညှပ်တဲ့အပိုင်း- ဒီအပိုင်းကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး နေရာတကျ ပြန်ထားရလွယ်အောင် အထူးဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ထုထည်မတူတာတွေ ဖြည့်တော့မယ်ဆိုရင် ညှပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ဘူးမှာ ပြောင်းတပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီစက်က ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Filling machine: is attached to the sensor part to ensure that machine will stop filling when the water amount reaches the programmed level. The machine will stop when there are no bottles in the line. This helps to save production resources.
ဖြည့်ပေးတဲ့စက်- ဒီစက်မှာ ပရိုဂရမ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ လယ်ဗယ်ရောက်ရင် စက်ရပ်သွားစေဖို့ ဆင်ဆာတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ လိုင်းမှာ ဘူးတွေမရှိတော့တဲ့အခါ ဒီစက်က ရပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါက ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
+ Automatic capping:
The bottle capping machine has six capping heads made of steel and coated withapremium 304 stainless steel layer. This helps to ensure the food hygiene and safety standards during the production process. The machine can be used for capping the plastic and aluminum caps.
အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းမှာ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၆ ခုပါပြီး အဲ့ဒီ့ခေါင်းတွေကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားကာ ပရီမီယမ် 304 စတိန်းလက်စ် စတီး အလွှာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါက အစားအသောက်တွေကို လုံခြုံမှုရှိစေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။ ဒီစက်ကို ပလပ်စတစ်နဲ့ အလူမီနီယမ်အဖုံးတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
It is easy to adjust the capping force, capping speed as well as conveyor speed.
အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ အရှိန်နှုန်း၊ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့အား နဲ့ ရွေ့လျားစက်အရှိန်ကို ထိန်းညှိဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
The gear conveyor will send the pet bottles that have been fully filled with water to the automatic bottle capping machine. After that, the bottles will be firmly held and sent to the capping heads. The caps are supplied and firmly capped onto the bottles. Finally, the clamping part will direct the bottles to the conveyor for the next process.
Bottle clamping part: is flexibly designed in the capping machine. It can be easily disengaged. When an operator wants to change toaspecific type of bottle, he/she just needs to remove the clamping part and replace withanew one.
Capping capacity: 8,000 caps/hour To ensure this capacity, the machine is connected to the automatic cap loading machine.
ရေဖြည့်ပြီးတဲ့ ဘူးတွေကို ဂီယာရွေ့လျားစက်က အော်တိုအဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးပါမယ်။ ဘူးတွေကို သေချာသယ်ယူပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေဆီကို ပို့ပေးပါမယ်။ အဖုံးတွေကို ဘူးမှာ သေချာကပ်ပေးပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ညှပ်တွေနဲ့ ဘူးတွေကို ရွှေ့ပြောင်းပေးတဲ့စက်ဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။
ဘူးတွေကို ညှပ်ပေးတဲ့ အပိုင်းကို အဖုံးတပ်ပေးတပ်ပေးတဲ့စက်မှာ စနစ်တကျတပ်ထားပါတယ်။ သူ့ကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဖြုတ်နိုင်ပါတယ်။ အော်ပရေတာက ဘူးကိုချိန်းချင်တဲ့အခါ ဘူးနဲ့ကိုက်တဲ့ ပုံစံခွက်ကိုသာ ချိန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အဖုံးတပ်ပေးနိုင်စွမ်း-တစ်နာရီမှာ အဖုံး ၈၀၀၀ တပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေဖို့ စက်ကို အော်တိုအဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက်နဲ့ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
Fifth step: Cap loading machine
ပဉ္စမ အဆင့်-အဖုံးဆွေကို သယ်ပေးသောစက်
Automatic cap loading machine
The machine includesacap holder, conveyor motor system, conveyor, air blowing system and an eye sensor.
The conveyor motor system will adjust the inverted bottle caps to ensure the absolute precision of blowing air.
Thanks to the eye sensor system, the machine will automatically supply more caps or stop supplying depending on the caps on the tray.
ဒီစက်မှာ အဖုံးတွေ ထည့်တဲ့ဗန်း၊ ရွေ့လျားစက်မော်တာစနစ်၊ ရွေ့လျားစက်၊ လေမှုတ်စနစ်နဲ့ မျက်လုံးဆင်ဆာပါဝင်ပါတယ်။
ရွေ့လျားစက်စနစ်က လေမှုတ်အားကို တိတိကျကျ ဖြစ်စေကာ အဖုံးတွေဇောက်ထိုးဖြစ်ခြင်းတွေကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
The bottle caps are sent to the cap tray of the machine. When the motor system works, the conveyor will transfer the caps to the capping part through the duct automatically.
Thanks to the eye sensor attached, the caps are quickly supplied in an exact direction with high capacity.
အဖုံးတွေကို စက်ရဲ့ အဖုံးထည့်တဲ့ဗန်းထဲကို ပို့ပေးပါတယ်။ မော်တာစနစ်က အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ရွေ့လျားစက်က အဖုံးတွေကို ပြွန်ကို ဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီ အော်တိုပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးဆင်ဆာပါတာကြောင့် အဖုံးတွေကို တိကျတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ သယ်ယူပေးပြီး လုပ်ဆောင်မှုလည်း မြင့်မားပါတယ်။
မျက်လုံးဆင်ဆာစနစ်ကြောင့် စက်က ဗန်းထဲမှာရှိတဲ့ အဖုံးအရေအတွက်အလိုက် အဖုံးတွေ ပေးပို့တာ ပေးပို့မှုကို ရပ်လိုက်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Sixth step: Anomaly inspection machine
The anomaly inspection machine is made of SUS304 material and equipped with an induction control panel.
ဒီစက်ကို SUS304 သတ္တုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ၀င်ရောက်မှုကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ဘောင်လည်း တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Inspect the bottles atarandom rate. Use the inspection light to detect the anomaly inside the bottles.
This process is especially important to ensure food hygiene and safety during the bottled water manufacturing process.
ကျပန်းနှုန်းနဲ့ ဘူးတွေကို စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ ဘူးထဲမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုကို စစ်ဆေးဖို့ မီးကို အသုံးပြုပါတယ်။
ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီစေဖို့ ဒီအဆင့်က အရေးကြီးပါတယ်။
The conveyor is used to connect different manufacturing processes. Using the plastic conveyor system will help to transfer the bottles quicker while ensuring space-saving. It helps to reduce manpower.
The frame of it is made of high quality 304 stainless steel, making it shiny, easy to clean and durable.
With this VACGF80006In 1 Automatic Bottle Filling Machine, the businesses can save up to 10 operators.
Currently, Viet An is supplying this product with an extremely attractive price.
ဒီစက်ကို မတူတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆက်ပေးဖို့ သုံးပါတယ်။ ဒီစက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘူးတွေကို မြန်မြန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တယ်။ နေရာချွေတာနိုင်တယ်။ လူလုပ်အားကို လျှော့ချနိုင်တယ်။
ဒီစက်ရဲ့ ဖရိန်ကို တောက်ပကာ သန့်ရှင်းရလွယ်ပြီး ကြာရှည်ခံဖို့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ 304 စတိန်းလက်စ်စတီးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
VACGF 80006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာ ၁၀ ယောက် လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ Viet An က ဒီစက်ကို လုံးဝဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Other automatic stages - purchased separately
In addition to above6automatic steps, the customers can consider to invest below automatic machines to save labor cost and improve productivity.
အပေါ်က အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်အပြင် ၀ယ်ယူသူတွေက အလုပ်သမားစရိတ်လျှော့ချဖို့ အောက်က အခြားအဆင့်များကိုလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
1. VALS4000 semi-automatic bottle loading and arranging machine:
၁။ VALS4000 ဘူးများကို တစ်ဝက်အော်တိုရွှေ့ပေးပြီး စီပေးသောစက်
VALS4000 bottle loading and arranging machine- VALS4000 ဘူးများကို ရွှေ့ပေးပြီးစီပေးသောစက်
The VALS4000 bottle loading and arranging machine is made of 304 stainless steel, making it shiny, easy to clean and durable.
High productivity. This automatic washing machine can replace one to two operators.
ဒီစက်ကို တောက်ပပြီး သန့်ရှင်းရလွယ်ကူကာ ကြာရှည်ခံတဲ့ 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုလည်းမြင့်မားပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်ပရေတာ ၂ ယောက်အစား အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဘူးများကို ရွှေ့ပေးပြီး စီပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Type of bottle -2mold (ml) ဘူးအမျိုးအစား 300-1500
Price (USD) ဈေးနှုန်း
2. VAD10000 Blowing machine
Application: Blow air to dry the bottles before packaging process
All the machine frame, blowing head systems are made of stainless steel. The bottles will be quickly dried thanks to the blowing heads connected to the air duct system.
အပလီကေးရှင်း- မထုတ်ပိုးခင် ဘူးတွေကို လေမှုတ်ပေးတယ်
စက်ဖရိန်တွေ အားလုံးမှာ လေမှုတ်စနစ်တွေကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လေပြွန်စနစ်မှာပါတဲ့ လေမှုတ်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေကြောင့် ဘူးတွေကို မြန်မြန်အခြောက်ခံ ပေးနိုင်တယ်။
Technical specifications of the Blowing machine
လေမှုတ်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Capacity (bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4000-8000
Power capacity (kw/h) ပါဝါ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 6
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 1370*800*1500
Weight (Kg) အလေးချိန် 190
3. VAL9000 Labeling machine with2heads
၃။ VAL9000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်ပေးသောစက်
Application: Automatically label the bottles through2labeling heads
With the application of the most advanced labeling technology in 2019, this machine will help to label quickly and exactly.
The specifications are displayed on the control panel so that the operators can monitor the quantity of the labels. Labeling capacity: 6,000 - 9,000 labels/hour
အပလီကေးရှင်း- လေဘယ်တပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းနှစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး ဘူးတွေကို အော်တို လေဘယ်တပ်ပေးတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လေဘယ်တပ်ပေးတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ဒီစက်က လေဘယ်ကို တိကျလျင်မြန်စွာ တပ်ပေးပါတယ်။
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 6000-9000
Power capacity (kw/h) ပါဝါ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4
Compatible bottle diameter (mm) အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော ဘူးအချင်း Φ28-Φ125
Compatible label length (mm) အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောလေဘယ်အလျား 30-250
Compatible label length (mm) အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောလေဘယ်အလျား 0.03-0.13
Compatible inside diameter အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော အတွင်းအချင်း 5"-10"
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 3200*1200*2100
Weight (Kg) အလေးချိန် 600
4. The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt glue: VAR9000.
၄။စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR9000
Application: Automatic labeling
Why should choose the automatic labeling machine:
- Higher labeling speed compared to manual process
- Even quality, the labels will not be wrinkled, damaged or torn.
- Time saving- Labor cost saving
- Competitiveness improvement
အပလီကေးရှင်း-အော်တို လေဘယ်ထိုးပေးခြင်းဘာလို့ အော်တိုလေဘယ်တပ်ပေးတဲ့စက်ကို ရွေးချယ်သင့်လဲ---
• လူသားတွေ ဆောင်ရွက်နှုန်းထက် ပိုပြီး မြန်တယ်
• လေဘယ်တွေကို မတွန့်စေ မပျက်စီးစေတဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်
• အလုပ်သမားစရိတ် ချွေတာနိုင်တယ်
• စီးပွါးရေး မြင့်တက်မယ်
Capacity (bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 6000-9000
Compatible bottle diameter (mm) အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောဘူးအချင်း Φ28-Φ125
Compatible inside diameter အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော အတွင်းမှ အချင်း 5"-10"
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 2400*2300*2100
Weight (Kg) အလေးချိန် 1.200
5. VAS9000 Steam Membrane Shrinking Machine
၅။VAS9000 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Use steam to shrink the membrane quickly with high quality
အလွှာကို လျင်မြန်စွာ ရှုံ့အောင် ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသည်။
Technical specifications of Steam membrane shrinking machine
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 5000-9000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 18
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 1800*500*1700
6. VA22000 Inkjet printers
၆။VA22000 မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
To print the expiry dates more quickly with better appearance,
With modern design, the advanced ink jet printing technology will help to increase printing speed. The printing mold is not required to directly contact the printing surface.
Print on various surfaces, including the curved surfaces such as bottles and bottles
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်များကို ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ မြန်မြန်ပရင့်ထုတ်ရန်
မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
Max-print-line အများဆုံး ပရင့်ထုတ်နိုင်သောလိုင်း 3
Electricity supply လျှပ်စစ်အား ပေးပို့မှု 240V
7. Automatic log membrane shrinking machine: VAGM10000
၇။လော့အလွှာကို အော်တိုရှုံ့ပေးသောစက်-VAGM 10000
Used to wrap the bottles into different packs of 6, 12, 24 bottles per pack.
The machine generates little noise, high capacity
Capacity: 10,000 bottles/hour
ဘူးတွေကို ၆၊၁၂၊၂၄ ဘူးနှုန်းနဲ့ ပါကင်တွေမှာ ထုတ်ပိုးပေးတယ်။
စက်က ဆူညံမှုနည်းစေပြီး လုပ်ဆောင်မှု မြင့်မားပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၀၀၀၀
Capacity: (bottles/hour,alog of 24 500ml) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 9000-11000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 21
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 5550*3700*2100
Weight (Kg) အလေးချိန် 870
Technical specifications of VACGF 8000 automatic filling machine
VACGF 8000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF8000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMS
VACGF 8000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 18
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 18
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 6
Machine capacity (350ml bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 5,000- 8,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 5,000- 8,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2,000-2,500
Power ပါဝါ 3.5
3 in 1 Dimension(LxWxH) (mm)3in 1 အတိုင်းအတာ 2300*1700*2400
Weight အလေးချိန် 2500
Air conveyor လေဖြင့် သယ်ယူပေးသောစက် 5000*220*1000
Plastic conveyor (LxWxH) (mm) ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် 15000*160
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF80006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF80006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
VAL9000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်ပေးသောစက်
4. The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt
- VAR9000 စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR9000
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
7. VAGM10000 Automatic log membrane shrinking machine
လော့အလွှာကို အော်တိုရှုံ့ပေးသောစက်-VAGM 10000
Hỏi đáp & đánh giá VACGF80006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်